Android version ပါ ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Messenger Kids – DigitalTimes.com.mm
392 Shares 161 Views
နည်းပညာမှာ ကလေးတွေပါလာတိုင်း အမြဲတမ်းပြဿနာတစ်ခုခုရှိလာမြဲပါပဲ။ ဒီနေ့ခေတ်လူရွယ်တွေတောင် ငယ်ငယ်က မိဘတွေရဲ့ “တီဗီနဲ့အနီးကပ်မထိုင်နဲ့ မျက်စိပျက်လိမ့်မယ်” ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေအရမ်းမဆော့နဲ့ စတဲ့စကားတွေကို နားထောင်ခဲ့ရတာပါပဲ။ အရင်က နည်းပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ မိဘတွေရဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှု တော်သင့်သလောက်တော့ရှိခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာရော??
ဒီနေ့ခေတ် ကလေးတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာကောင်းတာတစ်ခုက ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအသုံးပြုလာကြခြင်းပါ။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားတဲ့ Facebook ရဲ့ app သစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Messenger Kids လေး ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Messenger app ကိုမှ တော်တော်လေးပြောင်းထားတဲ့ app ဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ မိဘတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ကလေးတွေ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနဲ့ ဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်နေတာကစပြီး အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Messenger Kids လေး iOS အတွက် ဒီဇင်ဘာလမှာထွက်ရှိခဲ့ချိန်တုန်းက ဒီ app ကို app store တွေကနေ ဖယ်ဖုိ့ မက်ဇူကာဘက်ကို ဖိအားပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် Apple App Store မှာလည်း ခုချိန်ထိရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး Amazon Appstore မှာလည်းမကြာခင်ပဲရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း Google Play Store ပေါ်ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။
ဒီ app မှာတော့ ကလေးတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် “Child” အကောင်းကိုဖန်တီးလို့ရပြီး မိဘရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်နဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ထားပါတယ်။ ကလေးက တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စာပို့ (chat) မယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်က ကလေးကိုစကားလာပြောမယ်ဆိုရင် conversation မစခင်မှာ မိဘကိုအရင်အကြောင်းကြားမှာပါ။ လာပြောတဲ့သူကစိတ်ချရတယ်ထင်ရင် ယုံကြည်ရတယ်လို့ မိဘကထင်ရင် ဆက်သွယ်ခွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Messenger Kids ရဲ့ ပြဿနာက မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေမှာကလေးတွေရင်းနှီးနေတဲ့ Messenger app နဲ့မတူတဲ့အတွက် သုံးရတာအသားမကျဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Kik တို့လို chat app တွေဆိုရင် စည်းမျဉ်းလည်းသိပ်မကြပ်တဲ့အတွက် နာမည်ကြီးကာတွန်းဇာတ်ကောင်တစ်ခုခုပုံထည့်ပြီးတာနဲ့ စပြီးစကားပြောလို့ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Messenger Kids မှာတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲ အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ကလေးတွေသုံးသင့်တဲ့ app လေးပါ။
ဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းပညာပိုင်းမှာကလေးတွေရောက်လာတာ ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖုန်းတောင်သုံးခွင့်ရမယ်ဆိုရင် မိဘတွေအသိတွေကိုဆက်သွယ်ဖို့ ရိုးရိုးမက်ဆေ့ခ်ျ app ကိုပဲသုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ အဓိကက ကလေးတွေနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့နည်းပညာရဲ့အမှားမဟုတ်ဘဲနဲ့ နည်းပညာနဲ့ကလေးပတ်သတ်မှုအပေါ် မိဘရဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိမရှိက ပြဿနာပါ။ အခုဒီ app လေးကို မိဘတော်တော်များများကလည်းသဘောကျပြီးတော့ Apple App Store နဲ့ Amazon Appstore တို့မှာ 3.5 star rating တောင်ရထားပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ review ဆိုလို့ Android ဗားရှင်းမရသေးလို့ complain တက်တဲ့သူတွေပဲရှိပါသေးတယ်။
ဒီ Messenger Kids app လေးကို ဒေါင်းလုပ်ချချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်ခ်လေးမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Messenger Kids ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်
နညျးပညာမှာ ကလေးတှပေါလာတိုငျး အမွဲတမျးပွဿနာတဈခုခုရှိလာမွဲပါပဲ။ ဒီနခေ့တျေလူရှယျတှတေောငျ ငယျငယျက မိဘတှရေဲ့ “တီဗီနဲ့အနီးကပျမထိုငျနဲ့ မကျြစိပကျြလိမျ့မယျ” ၊ ဗီဒီယိုဂိမျးတှအေရမျးမဆော့နဲ့ စတဲ့စကားတှကေို နားထောငျခဲ့ရတာပါပဲ။ အရငျက နညျးပညာပိုငျးနဲ့ပတျသတျပွီးတော့ မိဘတှရေဲ့ထိနျးခြုပျနိုငျမှု တျောသငျ့သလောကျတော့ရှိခဲ့ပမေယျ့ ဒီနခေ့တျေမှာရော??
ဒီနခေ့တျေ ကလေးတှအေတှကျစိုးရိမျစရာကောငျးတာတဈခုက ဆိုရှယျမီဒီယာတှအေသုံးပွုလာကွခွငျးပါ။ ဒီပွဿနာကို ဖွရှေငျးနိုငျဖို့ ကလေးတှအေတှကျရညျရှယျဖနျတီးထားတဲ့ Facebook ရဲ့ app သဈတဈခုဖွဈတဲ့ Messenger Kids လေး ထှကျလာခဲ့ပါတယျ။ Messenger app ကိုမှ တျောတျောလေးပွောငျးထားတဲ့ app ဗားရှငျးတဈခုဖွဈပွီးတော့ မိဘတှအေနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ကလေးတှေ မိုဘိုငျးလျဖုနျးနဲ့ ဘယျသူနဲ့ဆကျသှယျနတောကစပွီး အပွညျ့အဝထိနျးခြုပျခှငျ့ရှိမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီ Messenger Kids လေး iOS အတှကျ ဒီဇငျဘာလမှာထှကျရှိခဲ့ခြိနျတုနျးက ဒီ app ကို app store တှကေနေ ဖယျဖုိ့ မကျဇူကာဘကျကို ဖိအားပေးခဲ့ကွပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ Apple App Store မှာလညျး ခုခြိနျထိရှိနဆေဲဖွဈပွီး Amazon Appstore မှာလညျးမကွာခငျပဲရောကျလာခဲ့ပါတယျ။ အခုလညျး Google Play Store ပျေါရောကျလာခဲ့ပွနျပါပွီ။
ဒီ app မှာတော့ ကလေးတှအေနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ကိုယျပိုငျ “Child” အကောငျးကိုဖနျတီးလို့ရပွီး မိဘရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျချအကောငျ့နဲ့တိုကျရိုကျခြိတျထားပါတယျ။ ကလေးက တဈယောကျယောကျနဲ့ စာပို့ (chat) မယျဆိုရငျ ဒါမှမဟုတျ တဈယောကျယောကျက ကလေးကိုစကားလာပွောမယျဆိုရငျ conversation မစခငျမှာ မိဘကိုအရငျအကွောငျးကွားမှာပါ။ လာပွောတဲ့သူကစိတျခရြတယျထငျရငျ ယုံကွညျရတယျလို့ မိဘကထငျရငျ ဆကျသှယျခှငျ့ပေးနိုငျပါတယျ။
Messenger Kids ရဲ့ ပွဿနာက မိုဘိုငျးလျဖုနျးတှမှောကလေးတှရေငျးနှီးနတေဲ့ Messenger app နဲ့မတူတဲ့အတှကျ သုံးရတာအသားမကဖြွဈနိုငျပါတယျ။ Kik တို့လို chat app တှဆေိုရငျ စညျးမဉျြးလညျးသိပျမကွပျတဲ့အတှကျ နာမညျကွီးကာတှနျးဇာတျကောငျတဈခုခုပုံထညျ့ပွီးတာနဲ့ စပွီးစကားပွောလို့ရပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ Messenger Kids မှာတော့ဒါမြိုးမဟုတျဘဲ အပွညျ့အဝထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့အတှကျ ကလေးတှသေုံးသငျ့တဲ့ app လေးပါ။
ဆိုရှယျမီဒီယာနညျးပညာပိုငျးမှာကလေးတှရေောကျလာတာ ကောငျးတယျလို့တော့ပွောလို့မရပါဘူး။ ကလေးတဈယောကျအနနေဲ့ ဖုနျးတောငျသုံးခှငျ့ရမယျဆိုရငျ မိဘတှအေသိတှကေိုဆကျသှယျဖို့ ရိုးရိုးမကျဆခြေျ့ app ကိုပဲသုံးလို့ရနိုငျပါတယျ။ အဓိကက ကလေးတှနေဲ့ထိတှနေ့တေဲ့နညျးပညာရဲ့အမှားမဟုတျဘဲနဲ့ နညျးပညာနဲ့ကလေးပတျသတျမှုအပျေါ မိဘရဲ့ထိနျးခြုပျနိုငျမှုရှိမရှိက ပွဿနာပါ။ အခုဒီ app လေးကို မိဘတျောတျောမြားမြားကလညျးသဘောကပြွီးတော့ Apple App Store နဲ့ Amazon Appstore တို့မှာ 3.5 star rating တောငျရထားပါတယျ။ မကောငျးတဲ့ review ဆိုလို့ Android ဗားရှငျးမရသေးလို့ complain တကျတဲ့သူတှပေဲရှိပါသေးတယျ။
ဒီ Messenger Kids app လေးကို ဒေါငျးလုပျခခြငျြရငျတော့ အောကျကလငျ့ချလေးမှာ ရယူနိုငျပါတယျ။
Messenger Kids ကိုဒေါငျးလုပျဆှဲရနျ
Xiaomi Mi A1 ကို ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း